သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Scroll Bar/ Boxဖြင့် Bloggerတွင် Postတင်မယ်
Scroll Bar/ Boxဖြင့် Bloggerတွင် Postတင်မယ်
Scroll Bar/ Boxသည် မိမိ၏ Webpageအား နေရာယူမှု နည်းပါးပြီး တစ်ချိန်တည်းဖြင့် Postတစ်ခုကို Scrollလုပ်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုတင်ဖို့ တောင်းဆိုလာသောကြောင့် တမျိုးတဖုံ အကျိုးရှိမလားဆိုပြီး တင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
၁။ Blogger ထဲသို့ Sign In၀င်ပါ။
၂။ Dashboard > New Postကို ခေါ်ပါ။
၃။ အောက်ပါ Codeကို Post boxတွင် သွင်းလိုက်ပါ။
<div style="overflow:auto;width:300px;height:200px;padding:10px;border:1px solid #eee">Your Text here here!</div>
၄။ Your Text Hereနေရာတွင် မိမိထည့်လိုသော အကြောင်းအရာများအား အပြည့်အစုံထည့်လိုက်ပါ။
၅။ Publish Postလုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။
- ငါးဖယ်ခြစ် (ထိုင်းမှဝယ်လာသည်)
- ငါးဖယ်ခြစ်ကို ဆား၊အချိုမုန်.နဲ.နယ်ပြီး ကြော်ပါ။
- ဆီပူလျှင် ကြက်သွန်နီ၊ဖြူ ကိုကြော်ပါ။ ငရုတ်သီးမူန်.အနည်းငယ်ထည်.ပါ။
- ကြက်သွန်များနွမ်းသွားလျှင် ခရမ်းချဉ်သီးထည်.ကြော်ပါ။
- မကျည်းမှည်. ရည် ကို အနည်းငယ်ထည်.ပါ။
- ခရမ်းချဉ်သီး ကြေသွားရင် ခုနက ကြော်ထားတဲ. ငါးဖယ်တွေကိုရောပြီးကြော်လိုက်ပါ။
- ရခါနီးရင် နံနံပင် အုပ်ပေးလိုက်ပါနော်။
မှတ်ချက်။ Scroll Bar/ Boxအား ချဲ့လိုပါက WIDTH: 300 နှင့် HEIGHT:200တွင် တန်ဖိုးထပ်တိုးနိုင်ပါသည်။